Hollywood Faan, Miiska Kombuyuutarka, Miiska Dharka - Yifan
8 khaanadaha Hollywood Vanity Mirror oo leh Bulbs iyo Desk Set Black Tani Hollywood Glam Set waxay leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay iyo in ka badan. Muraayadda iftiimaya ee qumman iyo miiska sare ee dhalada si ay u soo bandhigaan wax kasta oo uu qalbigaagu doonayo. Muraayadda waxay haysaa laydhadh jilicsan, khaanadaha miiskana waxaa lagu dhammeeyaa kuusyo qaali ah oo nooca dheeman ah. Ku dar xarrago meel kasta oo leh qaabkan fudud ee fudud weli. U diyaarso qolkaaga jiifka si aad uhesho khibrada buuxda marka aad codsaneyso qurxintaada, adoo ku raaxeysanaya masraxa buuxa ...
Muuqaalkan casriga ah ee casriga ah ee casriga ah, oo la mid ah muraayadda saxarada ayaa leh dhar casri ah iyo lugaha dahabka aan caadiga ahayn. Muraayad dhab ah oo marmar cad ah iyo muraayad oval ah oo la mid ah ayaa ka dhigaysa tan aan micnaha lahayn ee quruxda badan inay ka soo muuqato inta kale. Qeybtan isku dhafan waxay si fiican ugu eegi doontaa qolkaaga jiifka. Ka hubi qaybahayaga kale ee ururintan si aad uhesho muuqaal isku xidhan. Dhismaha birta, marmar faux, alwaax adag iyo maqaar PU waxay xaqiijineysaa taageero adag, adeegsi waara iyo khibrad raaxo leh ...
Maalmahan, miisaska wax aan waxba tarayn ayaa ku tartamaya alaabada guryaha ee qiimaha sare leh ee ku saabsan qiimaha. Qofna ka hor istaagi maayo mid ka mid ah inuu helo haddii aad awood u leedahay inaad ku bixiso wax aan macno lahayn oo la isku qurxiyo. Haddii ay dhacdo inaad hadda raadineyso wax aan waxba tarayn, waxaan ku faraxsanahay inaan muujiyo laba ikhtiyaar. Iibso muraayad darbi oo fadhiiso sidoo kale miis raaxo leh oo raaxo leh. Taasi waa taas in waxtarkaaga khiyaaliga ahi uu raagayo. Midda labaad, soo iibso qalabka wax lagu qurxiyo ee keydkiisu xadidan yahay ama soo iibso weel caag ah oo yar oo ka faa'iideyso tog ...
Faahfaahinta MAYA. MUUQAALADA YF-D006 4 Khaanado, 1 xayeysiis keyboard ah STYLE Dhaqameed MAADKA Melamine guddiga TABLE DIMENSION 43.3 x 19.68 x 29.52 inji waxaan taageereynaa OEM cabirka MIRROR KU JIRA HALKAN KA BAAHAN YAHAY GARGAARKA Loo Baahan Yahay 3 Sano Xaddidan (degaan), 1 Sano Xaddidan (ganacsi) Dhameystirka dusha cad waa shay lama huraan u ah qolka dhalinyarada, xafiiska guriga, ama meel kasta oo loo baahdo goob shaqo oo shaqeyneysa. Sidoo kale miiskan waxaad ku ridi kartaa qolkaaga jiifka, ...
Faahfaahinta MAYA. MUUQAALADA YF-D016 1 Khaanad, 1 xabbo oo leh albaab albaabo STYLE qalab casri ah MAALKA melamine TABLE DIMENSION 120/140 / 160x60x75cm waxaan taageernaa OEM cabirka MIRROR KU DARSAN HAL GARO BILAASH AH BILAASH LOOGU TALAGALAY 3 Sano oo Xaddidan (degenaansho), 1 Sano Xaddidan (ganacsi) Lagu dhisay kaydinta maskaxda, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ilaaliso nidaamka iyo abaabulka xafiiska gurigaaga. Muujinta qotodheer desktop, 50 / 60cm, golaha wasiirada qoto dheer ka dhigaysa guriga ugu fiican ee dokumentigan gaarka loo leeyahay ...
Faahfaahinta MAYA. MUUQAALADA YF-CD006 4 Khaanado, 1 kumbuyuutar oo loo yaqaan 'keyboard' STYLE oo ah qalab casri ah 'MATERIAL melamine board' TABLE DIMENSION 120x45x70cm waxaan taageernaa OEM cabirka MIRROR KU DARAN HAA GOLAHA LOO BAAHAN YAHAY WARARKA 3 Sano Xaddidan (deganaansho), 1 Sano Xaddidan (ganacsi) Soo bandhigaysa 4 shelf oo furan si loo kaydiyo agabyada xafiiska, Waraaqaha, faylalka faylalka, iyo waxyaabo badan oo qurxinno yaryar ah, 4-taarif shelf ayaa si habboon ugu habboon loo dhigi karaa dhinaca bidix ama midig ee la bixinayo ...
YF-T10 Waxyeello weyn oo qurxiyo leh oo leh shelf shelf
Faahfaahinta MAYA YF-T10 MUUQAALKA Kaydinta, Khaanadaha, Muraayadda La saari Karo Qaab Ciyaareedka MDF dhalaalaya + lugaha birta ah ee biraha ahama TABLE DIMENSION 1200 * 500 * 750mm 1000 * 500 * 750mm waxaan taageernaa OEM baaxadda MIRROR AYAA LAGU DARAY HAA ASSEMBLY U BAAHAN YAHAY 3 Sannad Xaddidan (degaan), 1 Sano Xaddidan (ganacsi) Qiimaha EXW: US $ 0.5 - 9,999 / Cadad (la hadal adeegga macaamiisha) Qiyaasta MinOrder: 30Plices Supply Kartida: 10000 Cadad / Cadad Bil kasta ...
YF-T3 oo ay ka buuxdo miis dhar xidhasho oo casri ah
Faahfaahinta MAYA. FEATURES YF-T3 FEATURES Kaydinta, Khaanadaha, muraayadda dusha sare dhajisa STYLE Raaxada & Qalabka casriga casriga ah ee loo yaqaan 'MDF gloss gloss high', Dahaarka dahaarka birta ee biraha ahama TABLE DIMENSION 900mmL x 400mmW x 750mmH 1000mmL x 400mmW x 750mmWaxaan ku taageernaa OEM cabirka MIRRORKA LAGU DARAN YAHAY DALKA SOO SAARAY (degaan), 1 Sano Xaddidan (ganacsi) Qiimaha EXW: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (kala hadal adeegga macaamiisha) Tirada Min.Order: 30Plices Supply Kartida: 10000 Piece / P ...
Faahfaahinta MAYA. MUUQAALADA YF-T2 Kaydinta, Khaanadaha, Muraayada Muraayadda ah ee loo yaqaan 'LED Mirror STYLE Luxury & Modern MATERIAL High gloss MDF, Gold plating steel steel TABLE DIMENSION 800mmL x 400mmW x 750mmH 1000mmL x 400mmW x 750mmH 1200mmL x 400mmW x 750mmH waxaan taageersanahay OEM oo ah cabirka MIRROR INCLUDED GARGAAR Loo Baahan Yahay 3 Sano Xaddidan (degaan), 1 Sano Xaddidan (ganacsi) EXW Qiime: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (la hadal adeegga macaamiisha) Tirada Min.Order: 30Pieces Supply ...
YF-H-802-2 Miiska Buffet-ka Madow 2 Albaabbada & 3 ...
Faahfaahinta MAYA YF-H-802-2 MUUQAALKA shelf, Sawirro, Albaabada STYLE Raaxo & Qalab Casri ah oo Qalab MDF ah + Muraayad heer sare ah + birta ka sameysan birta birta ka sameysan oo aan fiicnayn TABLE DIMENSION 1200 / 1500mmL * 400mmW * 850mmH waxaan taageernaa OEM cabirka MIRROR KU DARSAN HAA ASSEML DARYEEL 3 Sanno Xaddidan (degaan), 1 Sano Xaddidan (ganacsi) EXW Qiime: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (la hadal adeegga macaamiisha) Min.Order Quantity: 30Plices Supply Kartida: 10000 Piece / Pieces per ...
Run ahaan magaceeda, miiskeena qaxwaha ee qarniga qarniga loo waxyooday wuxuu ka muuqdaa dusha sare si uu u muujiyo booska keydinta ee qarsoon. Dhamaadka lakabka walnut-ka waxaa lagu dhejiyaa dusha caleen marmar ah oo loogu talagalay meel bannaan oo dheeri ah - oo ku habboon kaydinta buugaagta inta lagu jiro kulankaaga soo socda. Miiska kafee ee keydinta sare kor u qaad wuxuu bixiyaa qaabab fara badan iyo keydinta booskaaga casriga ah. Isku darka xariifka ah ee walxaha waxay ku darsataa taabashada diirimaadka iyo sidoo kale qaab quruxsan qurxinta qolkaaga oo ay ku jiraan hadhuudh iyo alwaax siman ...
YF-H-901 TV Istaag 3-Khaanad Media Istaag oo leh Gol ...
Faahfaahinta MAYA YF-H-901 MUUQAALKA Sawir qaadayaasha oo ay kujiraan, Kaydinta Furan, Maareynta Fiilooyinka Qaab Ciyareedka raaxada & Qalabka casriga casriga ah ee loo yaqaan 'MAD' guddiga sare ee muraayadda Masaarida + Muraayad shidan DIMENSION 1830/2030 / 2230mmL * 400mmW * 420mmH + 1230 / 1360mmL * 600 / 700mmW * 400mmHwe O ee cabirka MIRROR AY KU DARAN YAHAY GOLAHA LOO BAAHAN YAHAY 3 Sano Xaddidan (degaan), 1 Sano Xaddidan (ganacsi) EXW Qiimaha: US $ 0.5 - 9,999 / Cadad (la hadal adeegga macaamiisha) Min.Order Tirada: 30Pieces Suppl ...
YF-H-211 Dharka Casaanka ah ee Casaanka ah ee Casriga ah 2 Khaanadaha ...
Faahfaahinta MAYA YF-H-211 MUUQAALKA Kaydinta, Khaanadaha Qaabdhismeedka 'Multifunctional & Modern MATERIAL High gloss MDF board + Velvet + Laydhka birta biraha ahama TABLE DIMENSION 400mmL x 400mmW x 500mmWaxaan ku taageereynaa OEM xajmiga MIRRORKA LAGU DARYEEL YAHAY DIIWAANKA LOO BAAHAN YAHAY 3 , 1 Sano Xaddidan (Ganacsi) Qiimaha EXW: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (la hadal adeegga macaamiisha) Min.Order Tirada: 30Pieces Supply Kartida: 10000 Piece / Cadad Bishiiba Port: Tianj ...
Faahfaahinta MAYA YF-H-206 MUUQAALKA Kaydinta, Khaanadaha, Muraayadda Qiyaasta Qaabdhismeedka 'STYLE Multifunctional & Modern MATERIAL High gloss MDF board + Laydhka biraha aan xaddidnayn TABLE DIMENSION 420mmL x 420mmW x 420mmH 500mmL x 400mmW x 500mm 3 Sannad Xaddidan (deganaansho), 1 Sano Xaddidan (ganacsi) Qiimaha EXW: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (la hadal adeegga macaamiisha) Tirada Min.Order: 30Plices Supply Kartida: 10000 Pi ...
Faahfaahinta MAYA YF-H-201 MUUQAALKA Kaydinta, Khaanadaha, Muraayadda Qiyaasta Qaabdhismeedka 'STYLE Multifunctional & Modern MATERIAL High gloss MDF board + Stainless steel LAGU TABLE DIMENSION 400mmL x 400mmW x 500mmWaxaan ku taageereynaa OEM xajmiga MIRROR KU DARSAN YES ASSEMBLY Loo Baahan Yahay Sannad 3 ), 1 Sano Xaddidan (Ganacsi) Qiimaha EXW: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (kala hadal adeegga macaamiisha) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Kartida: 10000 Piece / Cadad Bishiiba ...
Alaabtayada waxaa lagu soo saaraa alaabada ceeriin ee ugufiican. Daqiiqad kasta, waxaan si joogto ah u horumarinaa barnaamijka wax soo saarka.
Alaabtayadu waxay leeyihiin muuqaal qurux badan, shaqo wanaag iyo tayo sarreysa.
Qiimaha macquulka ah, adeegga iibka kadib ee lagu qanco, waxaan sidoo kale kugu soo dhaweyneynaa inaad soo booqato warshadeena waqti kasta oo aad rabto.
Farqiga u dhexeeya Dhinacyada iyo Buffet-ka
Dhinacyada Dhinacyadu waxay ku imaan karaan qaabab fara badan oo leh astaamo badan oo kala duwan. Shaashadda casriga ee casriga ahi badanaa waa mid jilicsan oo waxay yeelan kartaa lugaha waxoogaa ka yar kan loox dhaqameed. Marka la dhigo qolka fadhiga, dhinacyadu waxay u shaqeyn karaan sidii xarun madadaalo. Sababtoo ah l ...
Runta ku saabsan miisaska kafee iyo maxaad ugu baahan tahay mid
Waxaan had iyo jeer helnaa su'aalo, midkeenna ugu caansan waa haddii aad u baahan tahay miiska qaxwada. Weydiiso naqshadeeye kasta oo gudaha ah wayna kuu sheegi doonaan, ficillada foosha ayaa qaab kasta u sameysmaya. Maxaad u abuureysaa qol qurux badan hadaadan waligaa isticmaali doonin? Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la dejiyo sida aad u isticmaali doonto s ...
Cadadyada Alaabta Aasaasiga ah Waxay u Baahan Yihiin Qol Qol Walba
Siyaabo badan, qolka jiifka waa qolka ugu muhiimsan ee guri kasta. Waxay kaa caawineysaa inaad nasato oo aad nasato maalin dheer ka dib, iyo qaabeynta qolka jiifkaaga waa inay ujeedkeedu tahay abuuritaanka jawi ku habboon oo dhiirrigeliya hurdada. Maalgelinta alaabta guriga ku habboon waxay kaa caawin kartaa inaad tan gaarto oo aad kor u qaaddo tayada ...
Warshadaha Qoryaha ee Hebei Yifan waxay ku yaalliin Quyangqiao, Gobolka Zhengding, oo baaxaddiisu dhan tahay 6,600 mitir murabac. Kahor intaanan bilaabin ganacsigeenna caalamiga ah, Guullo waa weyn ayaa laga gaadhay dhinaca Ganacsiga ee Shiinaha Warshaddu waxay leedahay qalab wax soo saar oo gees ah, miinshaaro elektaroonig ah, layliyo lix dhinac leh oo otomaatig ah, mashiinno dhejis toos ah oo laga soo waarido Jarmalka iyo qalab kale oo ballaadhan. . Waxaan u hoggaansameynaa siyaasadda qaran ee ilaalinta deegaanka oo waxaannu leenahay habab bulsheed bullaacad ah. Bishii Ogosto 2019, aagga warshaddu waa la ballaariyay, qalabkiina mar labaad ayaa la dhammaystiray.
Waxaan diirada saareynaa bixinta adeegga macaamiisheena ...
Tayadu waa Kow, Tiknoolajiyaddu waa aasaas
Waxaan dejinay nidaam xakameyn tayo leh oo adag.